Amagama amahle besilisa (American)
amagama zabesilisa bajoyine US ngo ingxenye enkulu ye-Anglo-Saxon futhi anliyskih izidlaliso. Ngaphezu kwalokho, sekuyiminyaka eminingi kwakukhona kwemali kusukela ko-Yurophu nase-Asia, njengoba sokuthuthwa kwempahla ubuKristu likhetha eziseBhayibhelini futhi amagama abangamaJuda. I ukwakheka kwesizwe American kusekelwe isiNgisi, amasiko Irish futhi Scottish ukuthi ekupheleni kwekhulu XVIII abavela ezindaweni lwabo lwendabuko. Ngemva kwalokho kuhlangana khona ngala Dutch, isiJalimane, isiFulentshi naseSweden. Nokho, abanye bakholelwa ukuthi amagama owesilisa waseMelika, efana kakhulu emasikweni endaweni luvame, sisekelwe isiko ngesiNgisi. Ngisho nanamuhla, isizwe Melika uyaqhubeka ukuthuthukiswa yayo. Ngokwesibonelo, asetshenziswa kakhulu lapho emithathu ingxenye uhlelo yokuqamba, lapho esikhundleni igama amagama asetshenziswa ngendlela "igama lokuqala, maphakathi, isibongo."
Kulokhu-ke eyokuqala, noma ngasese, igama kubhekwa njengento ebaluleke kakhulu. Akukhona nje kuphela isidlaliso esimele abantu, kodwa futhi aqondwe njengokufaka egxilile ngokusemthethweni ngesikhathi sokuzalwa. Eyesibili, noma phakathi, igama kuyaqabukela esetshenziswa futhi ngokuvamile libhekisela endaweni noma omndeni, kanye zibizwe ubuntu ezidumile ngezenzakalo ezibalulekile. Kunzima ukuthola izwe ukuthi akuveli ixazululwe e-United States. Isizwe elinomlando eziyinkimbinkimbi, okuningi kwi ukulahlekelwa esidumile kangaka emhlabeni, abaningi emhlabeni wonke, ungezwa amahle amagama besilisa American.
Thanda emasikweni ezizwe eziningi, osanda kuzalwa US izakhamizi uthole igama labo kubazali babo, ngokuhambisana nezifiso zezihlobo noma izintandokazi zenkolo. Ngokuvamile, omama abasebasha futhi eningobaba nekuhumusha uhlu ahlukahlukene kanye Izincwajana, elinikeza izidlaliso bendabuko kanye nezincazelo zawo. amagama US zabesilisa kufanele kuhlanganiswe kahle igama, kube euphonious futhi legkoproiznosimymi, kodwa namanje bafanelwe inhlonipho futhi unikeze umnikazi walo ngengxenye enhle kunazo zonke futhi enenzuzo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kabanzi zonke izinhlobo nemikhiqizo.
Umphumela kungase kubhekwe njengokwelapha amagama zabesilisa (US), okuyinto akhiwa ngokwengeza isijobelelo, ekunciphiseni igama wokuqala noma omunye ngu sesibopho ukuthobisa endaweni ethize. Isibonelo esihle kungaba igama Robert, esesikhundleni 10 nemikhiqizo. Phakathi izidlaliso zesifazane uqokomisa Elizabeth, okuyinto AmananiBUDGET_NAME ukuba 34 amafomu esuselwe Elisa ukuze Lizzie. AseMelika ayevame uthole amagama izihlobo zabo, ezifana uyise noma umkhulu wothile kuphela. Kulokhu, igama ilungu eliphakeme kunezela isiqalo "eziphezulu", futhi Encane ngokulandelana, "omncane".
amagama Amadoda ethandwa kakhulu futhi nezincazelo zawo
James - lokuba umnqobi, umhlaseli;
Joseph - zande;
John - uhlobo, ngokubabazekayo, nababhulayo;
David - ethandekayo;
Christopher - umlandeli kaKristu;
Michael - ezinjengezikaNkulunkulu;
Patrick - umnumzana, i Aristocrat;
Robert - azi, abantu bami abathandekayo, ovumelana;
William - wasemuva, umnakekeli;
Edward - ukuchuma, ukuthuthukiswa, ngcono.
Kungani eMoscow - port 5 kwezilwandle? Moscow Canal
Ngifisa ezinhle indoda ubusuku evesini
Ingabe ngempela ukhona Uncle Sam?
Passion. Kuyini uthando nendlela sikubone
Ubisi yesikimu ekhaya
Indlela ukwakheka apple cider uviniga ekhaya?
I-oda yesampula kwabasebenzi. Ukuphathwa kwe-HR: imiyalo
Uhudo Green kanye nokwelashwa yayo
Indlela ukunciphisa petrol ( "iNsephe 3302") - amathiphu namasu
Lapho bangabeki ngoJulayi phezu kolwandle? Ibhishi amaholide ngoJulayi